Isu soo bax roobdoon ah ka dhacay magaalada Kismaayo – SBC
Isu soo bax roobdoon ah ka dhacay magaalada Kismaayo
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa ka dhacay isu soo bax roob doon ah oo ALLE looga baryayey raxmadiisa, waxaana ka soo qayb galey dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha magaalada.
Dibadbaxan oo ay ka qeybqaadanayeen boqollaal dadka reer Kismaayo ah ayaa ugu danbeyntii dadkii dibadbaxayaasha ahaa waxa ay isugu tageen fagaaraha weyn ee isbartiimo feekiyo halkaas oo ay ku oogeen labada rakaco ee salaada roob doonka ah, waxaana markii la tukaday kadib halkaasi ducooyin kala duwan ka jeediyay culumaa’udiin reer Kismaayo ah.
Gudoomiyaha Degmada Kismaayo Sheekh Xasan Yacquub Cali oo isagu kamid ahaa masuuliyiintii goobta ka hadashay ayaa ugu baaqay dadweeynihii halkaasi isugu yimid in ay badiyaan Istiqfaarta iyo baryada Eebe oo uu sheegay in ay tahay wadada keliya ee looga bixi karo Abaarta ka jirta dalka Soomaaliya.
Isu soo baxyo kale oo la mid ah roobdoontan ayaa ka dhacay magaalooyin kale oo ka mid ah gobolada Jubada dhexe & Jubada hoose sida degmada Bu’aale.
Warqabadka SBC ayey soo gaarayaan warar tilmaamaya in roobabkii xiliga gu’ga inay ka curteen deegaano ka mid ah gobolada Jubada Hoose & Jubada dhexe.